Enjoy 7s ကို PSmart အမည်နဲ့ရောင်းချတော့မယ့် Huawei! – AsiaApps
Enjoy 7s ကို PSmart အမည်နဲ့ရောင်းချတော့မယ့် Huawei!
January 2, 2018 January 3, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Enjoy 7s ကို PSmart အမည်နဲ့ရောင်းချတော့မယ့် Huawei!
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက Huawei အနေနဲ့ Huawei Enjoy 7s အမည်ရှိတဲ့ Mid-range Smartphone အမျိုးအစားကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြန့်ချီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်မှာစတင်ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ Huawei Enjoy 7s ဟာအခုဆိုရင် Mobile reporter တစ်ဉီးဖြစ်သူ Evan Blass ရဲ့ Twitter မှာ ဖော်ပြချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာရှိတဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ Huawei PSmart အမည်နဲ့ဖြန့်ချီတော့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
The Huawei PSmart will featurea5.65-inch, 18:9, 1080 x 2160 LCD display, octa-core Kirin 659 chip (4 x 2.36 GHz +4x 1.7 GHz), and3GB /32 GB or4GB / 64 GB storage variations. Meanwhile, the device will measure ~7.5 mm in thickness, weigh 143 g and includea3,000 mAh battery. It will arrive running Android 8.0 Oreo out of the box with Huawei’s EMUI 8.0.
Huawei P Smart ရဲ့ Feature တွေကိုကြည့်ရင် Enjoy 7s နဲ့ဘာမှကိုမကွာဟပါဘူး။ Enjoy 7s ရဲ့ Detail ကိုသိချင်ရင်တော့ အောက်ပါ link ကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ link ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Enjoy 7s နဲ့ P Smart တို့ဟာ အရွယ်အစားအပိုင်း၊ Display အပိုင်း၊ Storage version အပိုင်း၊ Android system အပိုင်းအစရှိတာတွေအကုန်တူညီနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
The Enjoy 7S goes for CNY1,499 and CNY1,699 ($226/€192 and $256/€218), but the P smart will costabit more since it will come with Google services.
Enjoy 7s ရဲ့စျေးနှုန်းကတော့ USD 200$ ကျော်လောက် အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဇန်နဝါရီလထဲမှာထွက်ရှိလာမယ့် Huawei PSmart ရဲ့စျေးနှုန်းကိုတော့တိတိကျကျမသိသေးပေမယ့် Google Service တွေကြောင့် Enjoy 7s တုန်းကစျေးနှုန်းထက်တော့အနည်းငယ်ပိုများနေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Camera ပိုင်းနဲ့ System ပိုင်းအချို့ကို Update လုပ်လိုက်တဲ့ One Plus 5T!